Izany no azonao atao amin'ny AirPlay sy macOS Monterey | Avy amin'ny mac aho
Efa fantatrao fa amin'ny macOS Monterey, azo atao izao ny mandefa votoaty mivantana amin'ny Mac, midika izany fa azon'ireo mpampiasa atao ny mampiasa ny iPhones azy ireo hilalao hira ao amin'ny MacBook, horonan-tsary, na hizara ny efijery. Ny sasany amin'ireo fiasa amin'ny macOS Monterey dia an'ny Mac misy M1 ihany. Soa ihany fa tsy izany no izy, na dia misy aza ny fepetra takiana amin'ny fampiasana AirPlay miaraka amin'ny Mac. modely tohanan'ny sy izay azo atao amin'ny macOS Monterey.
Ny macOS 12 Monterey dia nampidirina nandritra ny fehezanteny WWDC21. Ny rafitra miasa Mac vaovao dia hitondra traikefa voadio avy amin'ny macOS Big Sur teo alohany. Ny iray amin'ireo mampiavaka an'i Monterey dia ny fahaizan'ny AirPlay amin'ny Mac. Misy fepetra takiana amin'ny AirPlay mankany amin'ny Mac. Ireo no maodely iza no afaka mampiasa an'io fampiasa io:
Pro (2018 ary taty aoriana)
Air (2018 ary taty aoriana)
2019 ary avy eo
Mini (2020 ary taty aoriana)
iPhone 7 ary avy eo
Pro (taranaka faharoa ary taty aoriana)
Rivotra (taranaka faha-3 ary taty aoriana)
iPad (faha-6 sy taty aoriana)
mini (taranaka faha-5 ary taty aoriana)
Izany rehetra izany afaka manao isika miaraka amin'ny AirPlay sy Macs:
Mandefasa atiny amin'ny Mac anao avy amin'ny iPhone, iPad, na Mac Mac hafa aza. Jereo ny horonan-tsary, amboary ny fampisehoana Keynote ary henoy ny mozika amin'ny Mac anao rehefa milalao avy amin'ny fitaovana hafa ianao. Ny Mac-nao dia miasa amin'ny fitaovana Apple, ary mora kokoa ny mifandray raha toa ka mitovy ny ID an'ny Apple.
Ampiasao ho mpandahateny: Ny Mac dia afaka miasa ho mpandahateny AirPlay 2 an'ny antoko fahatelo. Io dia ahafahanao mitendry mozika na podcasts amin'ny Mac anao na mampiasa azy ho mpandahateny faharoa.
Fitaratra na fanitarana ny efijery: Ampiasao ny Mac anao ho fampisehoana faharoa ho an'ny rindranasa manohana azy, toy ny Keynote sy ny Photos.
AirPlay dia miasa tsy misy tariby sy tariby amin'ny alàlan'ny USB.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Monterey » Izany no azonao atao amin'ny AirPlay sy macOS Monterey